Sawirro: Maxay tahay sababta ay hoggaamiyayaasha Afrika dibedda ugu aadaan caafimaad? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxay tahay sababta ay hoggaamiyayaasha Afrika dibedda ugu aadaan caafimaad?
Sawirro: Maxay tahay sababta ay hoggaamiyayaasha Afrika dibedda ugu aadaan caafimaad?
Muqdisho (Caasimada Online)-Madaxwaynayaasha Nigeria, Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaan dhammaantood kalsooni ku qabin adeegayada caafimaad ee wadamooda. Waxayna wakhti badan ku bixayaan wadamada dibada si ay isu daaweeyaan.
Wadamada ay ka taliyaan ayaa adeegyada caafimaad yihiin kuwo liita, halka shacabka wadamadaasina ay ku tiirsanyihiin.
Dalka Benin ayaa waxaa xilka madaxtinimo haya nin da’ ahaan ka yar madaxda kale waxaana uu dhankiisa safar u aaday Faransiiska bishii June. iyadoona lagu sameeyey laba qalliin oo kala duwan. Mid kamid ah ayaa looga qalaykansarka ku dhaca taranka ragga halka mid kalena uu ahaa habdhiska dheef shiidka.